Wararka Maanta: Axad, July 11, 2019-Wasiir Goodax oo saxiixay mashruuc horumarinaya waxbarashada
Wararka Maanta- Axad, July 11, 2019
Wasiir Goodax, ayaa ka hadlay mashruucaan ahmiyadda uu u leeyahay horumarinta waxbarashada carruurta Soomaaliyeed.
"Waxaan maanta daah-furay isla markaana saxiixay mashruuca horumarinta waxbarashada ee (Education Cannot Wait) oo ay si wadajir ah u fulinayaan hay'adda ADRA iyo wasaaradda waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta Sare. mashruucaan ayaa waxaa laga fulin doonaa dhammaan gobollada dalka oo idil." ayuu yiri Cabdullaahi Goodax.
Waxaa daah-furka goobjoog ka ahaa hay'adaha ay ka mid yihiin USAID, Midowga Yurub, ECW secretarial, UNICEF iyo ADRA.
Mashruucaan ayaa waxaa laga fulin doonaa dhammaan gobollada dalka oo idil.